Fihanaky ny valanaretina :: Natomboky ny Filoha tao Ambilobe ny fitsaboana kitrotro maimaim-poana • AoRaha
Fihanaky ny valanaretina Natomboky ny Filoha tao Ambilobe ny fitsaboana kitrotro maimaim-poana
Namely mafy ny valanaretina. Tonga nijery ifotony ny firongatry ny aretina kitrotro, tany Ambilobe, ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, omaly. Fantatra fa nahatratra enina amby valopolo ireo zaza matin’ny kitrotro tany amin’ity distrika any amin’ny faritra Avaratra ity.
Miisa valonjato mahery ihany koa ankizy sy olon-dehibe mbola tratran’io areti-mifindra io ary
manaraka fitsaboana any amin’ireo toeram-pitsaboana any an-toerana. Manoloana izany fiparitahan’
ny valanareti-mifindra any Ambilobe izany, dia hisy ny hetsika fanaovam-baksiny sy fizarana fanafody ary fitsaboana maimaim-poana an’ireo olona marary. Hisy ihany koa ny fandefasana fiara manokana hiandraikitra ny fitsaboana an’ireo marary manerana an’ireo fokontany rehetra any Ambilobe.
« Hatao vaksiny avokoa ireo zaza enim-bolana ka hatramin’ny enin-taona. Tetikasa hiarahana amin’ny Sampandraharaha iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (Oms) io ary maimaim-poana ny fitsaboana an’ireo zaza sy ny olon-dehibe. Hisy ny fizarana vitamina sy fanafody fanefitra maimaim- poana mba hampatanjaka sy hampavitrika an’ireo zanantsika ireo », hoy ny Filoham-pirenena, izay niara-dia tamin’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny profesora Rakotonirina Julio sy ireo solontenan’ny Oms.
Tsy ho an’ny ao Ambilobe ihany fa hotanterahina any amin’ireo faritra rehetra manerana an’i Madagasikara ity hetsika ho fisorohana ny firongatry ny aretina kitrotro ity.
Omeo fitsaboana maimaim-poana ny vahoaka
“VILLAGE VOARA” :: Miandry fandaminana ny fifindran’ireo tra-boina